आफैं निहुँ खोजेपछि कुटाइ खाएकी थिइन् राखी सावन्तले, हेर्नुहोस् घटनाको पूरा भिडियो! - Online sakharapur
मुख्य पृष्ठ /अन्तर्राष्ट्रिय समाचार/आफैं निहुँ खोजेपछि कुटाइ खाएकी थिइन् राखी सावन्तले, हेर्नुहोस् घटनाको पूरा भिडियो!
आफैं निहुँ खोजेपछि कुटाइ खाएकी थिइन् राखी सावन्तले, हेर्नुहोस् घटनाको पूरा भिडियो!
आइतबार पंचकुलामा बलिउडकी आइटम डान्सर राखी सावन्तले अन्तर्राष्ट्रिय रेस्लर द रेबेलको हातबाट कुटाइ खाइन् । रेबेलले उचालेर रिंगमा पछारिदिएपछि उनको कम्मरमा चोट लागेको बताइएको छ । यो घटनामा राखी सावन्तले आफैं निहुँ खोजेर कुटाइ खाएको देखिएको छ ।
रेस्लर रेबेलले जो च्यालेन्ज दिएकी थिइन् त्यो सामान्य च्यालेन्ज थियो र यस्तो च्यालेन्ज रेस्लरहरुले अक्सर दिने गर्छन् । त्यसमाथि यो च्यालेन्ज राखीको लागि थिएन । उनले त त्यहाँ भएका महिलामध्ये कोही रेस्लर भएमा भिड्न आउन च्यालेन्ज गरेकी थिइन् । रेस्लरलाई दिएको च्यालेन्जको बीचमा राखी आफैं जान्ने भएर सिंहको मुखमा हात हालेझैं रिंगमा पसेकी थिइन् । राखीले रिंगमा रेबेलसँग डान्स र रमाइलो पनि गरिन् ।
डान्सका क्रममा राखीको व्यवहारले रेस्लर रेबेल रिसाइसकेकी थिइन् । उनले राखीको क्रियाकलाप सुरुमा त रमाइलो मानेकी थिइन् तर पछि राखीको चर्तिकला उनलाई मन परिरहेको थिएन । प्रोफेसनल रेस्लरलाई रेस्लिङको रिङमा राखीले जानीजानी चिढ्याएकी थिइन् । राखीको चटकले रेबेललाई रिस उठिरहेको भिडियोमा प्रस्ट देखिन्छ । तर राखीले यस्तो गर्न नछोडेपछि अन्ततः रेबेललाई रिस उठ्यो त्यसपछि उनले राखीलाई उठाएर पछारिदिएकी थिइन् । हेर्नुहोस् घटनाको